‘विप्लवमाथिको प्रतिवन्धले प्रहरी प्रशासन नै आतंकित भए’ — Bhugolnews
काठमाडौं । ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अझै टुंगिएका छैनन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि आम मानिसले फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले प्रतिबन्ध ठीक हो पनि भनेका छन् ।
विप्लव समूह चौकी लुट्न आउँछन् कि अब हतियारको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्रास प्रहरीहरुमा परेको आफूले पाएको उनले सुनाए । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता लेखकसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
कसरी गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भयो प्रधानमन्त्री स्वयंले विप्लव समूह लुटेराहरुको समूह हो, राजनीतिक होइन भनिसकेका छन् । बम पड्काएको छ, मान्छे मारेको छ, चन्दा आतंक मच्चाएको छ । अनि यस्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विरोध गर्ने ?
नेकपा विप्लवको समूहलाई पनि सरकारले वार्तामा बोलाउनु, वार्ता गर्नु र मूल प्रवाहको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण अवतरण हुन सकोस्, यसका लागि केही स्पेश दिन सकिन्छ भने स्पेस दिनुपर्छ । आखिर उनीहरुको कुरा के हो भनेर सुन्न हुन्न र रु सुन्नुपर्छ । कुरै नसुन्ने, वार्तामा आउनुस्, शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्नुस् पनि नभनी एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय गर्दैमा त समाधान हुँदैन ।
विल्कुल भएन । सरकारको तर्फबाट वार्ताको प्रयास होइन, जिम्मेवारपूर्ण ढंगको औपचारिक घोषणा समेत भएन भने त्यो राजनीतिक होइन । भन्दा त उहाँहरुले यो राजनीतिक समूह नै होइन, राजनीतिक विचार नै होइन भन्नुहोला । प्रचण्ड कमरेडसँगै बस्दा त त्यो राजनीतिक विचार नै थियो । अहिले प्रचण्डजी सत्तामा आएपछि त्यो विचार कसरी गैरराजनीतिक भयो रु अथवा राजनीतिक हो कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउनु अगाडि तपाईले खोजेको के हो भनेर सोध्नुपर्‍यो नि । उनीहरुले हाम्रो कुरा यो हो भनेपछि न राजनीतिक कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउन पाइन्छ ।
त्यसैले सरकारको भनाइ आफैं विरोधाभाष भयो । आपराधिक समूह हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो, किन क्याबिनेटले प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुपर्‍यो रु दिनदिनै अपराध भइरहेको छ । त्यसमा संलग्न हरेकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ र सरकारले ? छैन ।
यसको परिणाम गाउँतिर कस्तो देखिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो‘….
विप्लव समूहलाई तपाई हामीले भन्दा बढी प्रचण्ड र केपी ओलीहरुले चिनेका होलान् । बल प्रयोग समाधान हो या होइन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु रु उसोभए यो काम किन गर्दैछ त सरकार ?
दुईरतीनवटा कुरा हो भन्ने लाग्छ । एउटा त अहिले सरकारको व्यवहार नै कस्तो देखिएको छ भने सबै कुरामा पेलेर लैजाने । अलिकति दम्भ, कलिकति कठोरता र कलिकति अरुको कुरा नसुन्ने बानी एउटा कारण हो । त्यसैले सरकारले वार्ता भन्दा प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दियो ।
विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त तपाईले भनेको जसरी लिएको देखिएन नि रु कतैकतै पार्टी सभापति स्वयंले प्रतिबन्धको समर्थन मात्र गर्नु भएन, कारबाही गर्न माग गरेको सुनियो । फेरि वार्ताको प्रयास गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । कांग्रेसभित्र बुझाइमा एकरुपता नभएको हो ?
जस्तो मैले बुझेको, मलाई लागेको के हो भने सरकारले विप्लवबारे गरेको निर्णय, सिके राउतसँग गरेको सम्झौताबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गहन छलफल भएर आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने हो । आवश्यक पर्‍यो भने आकस्मिक बैठक नै बोलाउनुपर्ने हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डजीले राज्य कब्जा गर्दैछन्, हामी भने नेविसंघ कब्जामा लागेका छौं ।